Senatera Lylyson : VOAHELOKA HERINTAONA AN-TRANOMAIZINA -
AccueilRaharaham-pirenenaSenatera Lylyson : VOAHELOKA HERINTAONA AN-TRANOMAIZINA
15/02/2017 admintriatra Raharaham-pirenena, Vaovao songadina 0
Omaly maraina no nivoaka ny didim-pitsarana izay niampangana ny Senatera Lylyson Roland momba ny raharaha fiantsoana tanàna maty tamin’ny taona lasa. Voasazy herintaona sazy mihatra i senatera araka ny didy navoakan’ny fitsarana. Isan’ny nihampangana azy ny fanohitohinana ny filaminam-bahoaka tamin’izany raha ny fanazavana azo. Nanao antso tamin’ny haino aman-jery mihitsy moa izy tamin’io fotoana io manentana ny vahoakan’Antananarivo hanao an’io tanàna maty io. Raha tsiahivina dia ny talata 24 Mey 2016 izy no niantso ny vahoakan’Antananarivo hanao ny tanàna maty, ho fanoherana ny fitondrana misy amin’izao fotoana izao. Tsy dia nisy nanaraka loatra moa ny antso nataony satria niaina ny fiainana tahaka ny andavanandro ihany ny olona na izany aza dia nisy fanahiana teo amin’ireo mponina hoe inona no mety ho vokatr’ilay antso nataony. Ny 31 Mey no nivoaka ny didy fampisamborana azy. Taoriana kelin’izay dia natao ny fisavana ny tranony teny Andohanimandroseza. Iny resaka iny moa izany dia tsy idiran’ny maha senatera azy fotsiny fa amin’ny maha mpitandro ny filaminana azy ihany koa. Izany hoe olona tokony handamina nefa lasa niteraka korontana teto amin’ny firenena.
Andrasana ny didin’ny Hcc
Na amin’ny Hcc ihany koa dia andrasana ny fanapahan’izy ireo amin’ny fanekena na tsia ny fialan-tsininy tamin’ny tsy namonjana ny fivoriana ara-potoana faharoa. Enjehin’ny andininy faha-8 amin’ny fitsipika anatiny moa ny senatera mikasika io raharaha io. Ny mpisolovava azy foana no manatanteraka ny raharaha momba azy fa izy dia tsy nipoitra mihitsy. Ny 31 Janoary 2017 ireo Birao maharitra no nanapaka fa tokony ampiharina aminy ny andininy faha-8 amin’ny fitsipika anatiny mifehy ny antenimieram-pirenena satria tsy misy fialan-tsiny mari-pototra araka ny voalazan’ny fitsipika nataony. Rehefa nahita iny tranga iny ity senatera ity dia nalefany nanao fanambaram-pananana teny amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana ny mpisolovava azy ny 01 Febroary 2017. Araka izany dia andrasana ny didy avoakan’ny Hcc, momba io raharaha io.
Tsy niatrika ny fotoam-pitsarana momba ilay kidnapping namoizana ain’olona tany Toamasina, ny volana Novambra 2014 mihitsy ilay mpitsara voampanga ho anisan’ny atidoha nikotrika izany hatramin’ny omaly. Ny alatsinainy lasa teo no nandeha tetsy amin’ny efitrano ...Tohiny
Zandarimariam-pirenena : Zandarimariam-pirenena
Mpiasam-panjakana : Manohitra ny hosoka sy ny hala-bato